MWC 2016: ireo no ho vaovao lehibe | Androidsis
Alfonso ny voankazo | | MWC, About us
El Mobile World Congress Efa akaiky teo io. Ny foara telefaona lehibe indrindra eto an-tany dia hiverina any an-tanànan'i Barcelona manomboka ny 22 ka hatramin'ny 25 febroary, izay hanehoan'ny mpamokatra ao amin'ity sehatra ity ny zava-baovao.
fa, Inona no azontsika antenaina amin'ny MWC 2016? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fampisehoana rehetra voalahatra, ary koa ny telefaona, takelaka ary fitaovana hafa antenaina haseho amin'ity hetsika lehibe ity. Mamaky hatrany hahalala bebe kokoa!
1 Ireo no ho zava-dehibe atolotry ny mpanamboatra ao amin'ny MWC 2016
4.2 huawei mate boky
10 HTC, eo ve ianao?
Ireo no ho zava-dehibe atolotry ny mpanamboatra ao amin'ny MWC 2016
Na dia marina aza izany ny MWC dia hanokatra ny varavarany amin'ny 22 Febroary, ireo mpanamboatra lehibe mazàna dia mandroso ny fampisehoana ataon'izy ireo amin'ny faran'ny herinandro teo, noho izany, araka ny ho hitanao dia hisy marika vitsivitsy izay hampiseho ny vahaolana amin'ny asabotsy 20 sy ny alahady 21. Tadidio fa amin'ny Androidsis dia horesahintsika mivantana ny hetsika rehetra, noho izany Tsy miahanahana ianao hanaraka ny tambajotran-tserasera hahafantaranay ny vaovao rehetra aseho.
Araho ny @alfonsodefrutos
Ilay goavambe Koreana dia mirona hisarika ny sain'ny maro indrindra amin'ny MWC. Ary amin'ity taona ity dia tsy ho diso anjara. Ary, na dia afaka gaga anay foana aza izy ireo amin'ny vokatra bebe kokoa, ireo no ho zava-dehibe atolotry ny mpanamboatra ny hetsika nokasain'izy ireo ho an'ny Alahady 21 Febroary amin'ny 19:00 hariva
Efa namoaka anao izahay antsipirihany sasany momba ny Samsung Galaxy S7. Ary ny famoahana farany nataon'i La Caixa dia nanamafy ny ankamaroan'ny toetra teknika. Amin'izany fomba izany dia hamerina manolotra fantsona miaraka amin'ny Samsung famaranana premium misaotra ny vatany unibody vita amin'ny vy sy vera antonony.
Ankoatr'izay, ny fiverenan'ny slot microSD card, iray amin'ireo olana voatsikera indrindra tamin'ny maodely teo aloha, dia voamarina. Mikasika ny ambiny amin'ireo toetra ara-teknikan'ny Samsung Galaxy S7, antenaina fa hanana telefaona noforonina ny telefaona vaovao Tontonana Super AMOLED 5.1-inch hahatratra ny vahaolana amin'ny 2560 x 1440 teboka (QHD), izay hampidirina ihany koa a digitizer mora tohina hampiditra rafi-pifandraisana tena mahaliana ho an'ny mpampiasa.
Ny processeur hahatratra ny tsenantsika dia tsy ny Samsung Exynos 8890, fa ny Qualcomm Snapdragon 820 izay, miaraka amin'ny mahery Adreno 530 GPU ary ny 4 GB karazana fitadidiana RAM LPDDR4, hampanantena fahombiazana tsara fotsiny izy io.
Toa ny maodely misy fitehirizana anatiny 32 GB ihany no ho tonga any Espana, na dia efa noresahintsika tao aza ny Samsung Galaxy S7 dia hanana slot karatra microSD.
Samsung dia miloka be eo amin'ny sehatry ny fakantsary mba hiavaka amin'ny mpifaninana aminy ny Samsung Galaxy S7. Mba hahatratrarana izany dia nisafidy fakantsary lehibe misy ny a ny mpanamboatra Lensa 12 megapixel miaraka amin'ny haitao BRITECELL sy f / 1.7 aperture.
Ny zava-baovao iray hafa dia miaraka amin'ny Fanamarinana IP67 izay manaporofo ny fanoherany ny vovoka sy ny rano. Ny fifantohana tsikera hafa amin'ny Galaxy S6 dia ny tsy fisian'ity fanamarinana ity, ary toa nahatsikaritra ny fahadisoany ilay mpanamboatra Koreana.
Ary tsy azonay adino ny batterie 3.000 mAh, tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ny lanjan'ireo fitaovana entin'ity fitaovana ity izay handresy noho ny Android 6.0 Marshmalllow. Ny vidiny fampidirana? 699 euro.
Antenaina fa hampiditra Edge vaovao i Samsung. Ilay vaovao Samsung Galaxy S7 Edge dia hanana toetra mitovy amin'ny maodely mahazatra, na dia misy fahasamihafana vitsivitsy aza.
Hanomboka ny efijery an'ny Samsung Galaxy S7 Edge 5.5 santimetatra miaraka amin'ny tontonana miolakolaka amin'ny fanapahan-kevitra roa sy ny vahaolana mitovy, 2.560 x 1.440 teboka (QHD) miaraka amin'ny digitizer mora tohina amin'ny tsindry. Ny fahasamihafana lehibe hafa dia mitoetra ao amin'ny bateria, izay hitentina 3.600 Mah.
Ny ambiny endri-javatra dia mitovy amin'ny Samsung Galaxy S7: mpikirakira Qualcomm Snapdragon 820 miaraka amin'ny Adreno 530 GPU, 4 GB LPDRR4 RAM, tahiry anatiny 32 GB mivelatra amin'ny alàlan'ny slot microSD card, fakan-tsary 13-megapixel, ary ny Android 6.0 M.
Na eo aza ny zava-misy fa ny Samsung Galaxy S6 Edge dia nanova ny sehatra noho ny tontonana miolaka roa sosona, voafetra ihany ny fampiasa ao aminy, araka ny hitantsika tamin'ny famakafakana nataontsika. Soa ihany, ny ekipa mpamolavola Samsung dia nandray fepetra tamin'ity lafiny ity. manolotra ny mpamorona SDK izay ahafahan'izy ireo mampiditra ny fampiasa amin'ny fampiharana azy ireo amin'ny sidebars. Amin'ity tranga ity, ny Samsung Galaxy S7 Edge dia antenaina fa handany vola eo 799 sy 849 euro.
Mandritra ny fampisehoana ny voalohany Samsung Gear VR nanana ny fotoana iray hitsapana ity fitaovana mahaliana ity ao amin'ny IFA any Berlin ary tena tsara ny fahatsapanay.
Roa taona lasa izay ary manohy miloka amin'ny zava-misy virtoaly ny mpanamboatra. Ny taranaka vaovao an'ny Samsung Gear VR dia antenaina hanararaotra feno ny efijery mahery an'ny Galaxy S7 sy S7 Edge.
Hisy ihany koa ny tsy ampoizina lehibe: Araka ny filazan'i @evleaks, Samsung dia hanome ny solomaso Gear VR ho an'ireo mpanjifa izay manana Samsung Galaxy S7 na Galaxy S7 Edge eo anelanelan'ny 21 Febroary sy 10 martsa. Raha vantany vao lany io fampiroboroboana io, ny Samsung Gear VR dia mitentina 99 euro.
Amin'ity taona ity ny zava-misy virtoaly dia ho mpiorina mazava ao amin'ity sehatra ity. Ary Samsung dia tsy handany ny fotoana mety. Ho fanampin'ny fampisehoana ny solomaso misy ny vera virtoaly vaovao, ny mpanamboatra Koreana dia hahagaga antsika amin'ny fitaovana mahaliana sy mahaliana: ny Samsung Gear VR 360.
Ity fakan-tsary vaovao ity dia ho mahay mandrakitra atiny ho an'ny zava-misy virtoaly noho ny rafitra fakantsary fari-pahaizana 360. Tsy manana tsindry mazava amin'ny sehatry ny fampiharana ilay sehatra, ary ny fahafahan'ny fandraketana horonantsary amin'ity endrika ity dia mety ho ilay fisondrotana izay tsy ananan'ny Gear VR ho lasa gadget ilaina ao an-tranontsika.
Ilay mpanamboatra Koreana lehibe hafa dia tsy ho diso anjara tamin'ny fanendrena MWC. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy. LG dia miverina amin'ny entana miaraka amin'ireo smartphone vaovao, izay kendreny hanaitra antsika amin'ny vaovao tena mahaliana.
Ny manaraka 21 Febroary amin'ny 14:00 hariva ora no hanombohana ny fampisehoana ny LG. Ary ny LG G5 no ho mpiorina voalohany. Fantatr'ilay goavambe aziatika fa tsy maintsy mampiavaka azy amin'ny mpifaninana aminy izy, ary efa ampoiziko fa ho gaga anao ny LG G5. Be dia be.
Hanombohana azy, ny LG G5 dia hanana vatana unibody metaly, avelao ireo vita vita amin'ny hoditra hifantoka amin'ny famolavolana premium kokoa. Ny teboka mahaliana voalohany dia miaraka amin'ny ny bateria LG G5 dia hesorina misaotra ny rafitra iray natolotry ny mpanamboatra izay hamela ny batery hiova, na dia manana vatana vy aza.
Ho fanampin'izany, ny lafiny aloha sy ny lafy dia hatao amin'ny fitaovana iray mitovy amin'ny V10, misy silikona sy metaly hanatsarana ny fanoherana miaro ny faran'ny terminal manoloana ny bontsibontsina sy ny lavo.
Ary ny tsy ampoizina lehibe dia ho avy majika slot, slot iray eo ambanin'ny LG G5 ary hamela antsika, tsy hanala ny batterie ihany, fa koa hanampiana modules tena mitovy amin'ny style Tetikasa Ara.
Misaotra an'ity slot fanitarana ity azontsika atao manitatra ny bateria amin'ny alàlan'ny modely, miaraka amperage avo kokoa miaraka amin'ny tanany silikônika izay hiaro ny terminal, na manampy fakan-tsary matanjaka kokoa amin'ny tselatra.
Ny tsiambaratelon'ity Magic Slot ity dia mitoetra ao amin'ny seranan-tsambo fanitarana izay ahafahana manitatra ny fitaovana amin'ny alàlan'ny modules atolotry LG. Ireo fahafaha-manao dia saika tsy misy farany ary ny mpanamboatra dia azo antoka fa hanao ny ankamaroan'ity modely mahaliana ity.
Zava-baovao lehibe iray hafa no miaraka amin'ny fiasa Aseho lalandava, fiasa iray ahafahan'ny mpampiasa manana ny efijery mandrakariva hahitany fampandrenesana tonga toa ny antso tsy azoko na hafatra voaray. Ho hitantsika ny fomba nahaizan'ny LG nanatsara ny bateria tamin'ity fiasa ity namboarina ...
Mikasika ireo toetra ara-teknika, ny LG G5 dia antenaina hanana efijery eo anelanelan'ny 5.3 sy 5.6 santimetatra hahatratra ny vahaolana amin'ny 2560 x 1440 teboka, ho fanampin'ny efijery faharoa izay mitovy amin'ny an'ny LG V10 ary izany dia hiasa hijery ireo fampandrenesana haingana.
Tsy mahagaga, ny SoC Qualcomm Snapdragon 820 dia hiandraikitra ny fampandehanana ny sainan'i LG vaovao, miaraka amin'ireo matanjaka Adreno 530 quad-core GPU ary RAM 4 karazana LPDDR4 XNUMX GB.
Ny efi-tranony lehibe dia hisy roa Sensor 21 megapixel miaraka amin'ny stabilisation sary optika sy ny laser mifantoka. Rehefa manao fisamborana mahazatra isika dia afaka maka sary miaraka amin'ny vahaolana hatramin'ny 20 megapixel.
Raha mampiasa sensor indroa isika, dia hahafahantsika maka sary miaraka amin'ny zoro 135 degre sy vahaolana 135 degre. Te hanana bebe kokoa ve ianao? Eny ary, ankoatry ny flash LED indroa, ny fakantsary LG G5 dia hampiditra a rindrambaiko fanodinana sary nohatsaraina izay ahafahanao manoratra amin'ny endrika RAW. Ho fanampin'ny fananana fakantsary eo anoloana 8 megapixel. Azo antoka ihany koa fa ny LG G5 dia hanana sensor amin'ny dian-tànana.
Iray amin'ireo vaovao mahaliana indrindra, na dia mbola tsaho aza izy ireo ankehitriny dia ny fahafahan'ny LG mampiditra a Iris scanner amin'ny LG G5. Ho an'izany, ny mpanamboatra dia niara-niasa tamin'ny orinasa biometric Irience mba hampihatra an'io fampiasa mahaliana io ao amin'ny sahaniny.
Na dia tsy fantatsika aza ny haben'ny bateria dia azontsika atao ny manamarina fa hanana LG G5 Seranan-tsambo USB Type-C, ankoatry ny fihazakazahana Android 6.0 M. Mistery ny vidiny, saingy raha mijery ireo maodely teo aloha isika dia afaka mieritreritra fa eo amin'ny 649 euro eo ho eo.
Ilay mpanamboatra sinoa lehibe koa dia mandroso ny fampisehoana an-dry 21 Febroary amin'ny 14:00 hariva Amin'izany fomba izany dia hanolotra ny vahaolana alohan'i Samsung izy, mifaninana amin'ny LG amin'ny fotoana mitovy. Andao hojerentsika ny vaovaon'izy ireo.
Nahavita niaro ny sainam-pireneny manaraka ity avy amin'ny famoahana ilay goavambe Aziatika, ka tsy dia fantatsika ny momba ny endriny na ny lafiny teknika ananany. Na izany na tsy izany, ny tsaho indraindray dia manampy antsika hanana ny hevitry ny zavatra hahagaga antsika Huawei amin'izany Huawei P9.
Amin'izany fomba izany dia antenaina hanana a Efijery 5.2 inch izay hahatratra ny vahaolana amin'ny 1920 x 1080 teboka. Toy ny mahazatra, Huawei dia miloka amin'ny vahaolana samirery mba handresena ny Huawei P9.
Amin'izany fomba izany, ny P9 dia antenaina hampidirina processeur HiSilicon Kirin 955 miaraka amin'ny RAM 4 GB. Ny fakantsary 20 megapixel lehibe dia hanana sensor roa izay hamela ny fakana kalitao tena tsara, ary koa a fakan-tsary voalohany tsy misy zavatra hafa ary tsy latsa-danja noho ny 12 megapixel. Ny nofinofin'izay tia selfie.
Na dia tsy nisy sary navoaka aza, dia nahita sary mihetsika amin'ny Internet mampiseho bokotra ara-batana eo aloha isika. Fitaovana fantsom-pifandraisana? Raisina an-tsaina izany ny laharam-boninahiny manomboka mampiditra sensor biometric, mety ho lojika ny mieritreritra fa ny flagship Huawei manaraka dia mampiasa ity rafitra ity.
Araka ny efa nampoizina, Android 6.0 M no ho kinovan'ny rafitra fiasan'i Google hananan'ny Huawei P9, an'iza Bateria 2.900 mAh hanolotra fizakantena mihoatra ny ampy ho an'ny mpampiasa izy io.
Ny teboka mahery vaika dia ho tonga amin'ny vidiny. Ary ilay tsaho milaza fa ny Huawei P9 dia manodidina ny 400 euro. Ary raha dinihina ny vidin'ny fandefasana ny P8 sy P8 Lite dia tsy dia lavitra loatra ihany koa io vidiny io.
huawei mate boky
Huawei te-hanafika Xiaomi amin'ny tsenambarotra vaovao, solosaina findainy. Amin'izany fomba izany dia antenaina i Huawei hanolotra ny Huawei Matebook, a Laptop laptop - tabilao izay kely fotsiny no fantatra. Na dia milaza aza ny tsaho fa hiara-miasa amin'ny Windows 10 fotsiny izy dia azoko antoka fa tsy handingana ireo mpampiasa Android ireo tovolahy ao Huawei.
Andro vitsivitsy lasa izay dia namoaka sary tena mahaliana izy ireo izay a pensilihazo optika Ka azo inoana kokoa fa ny Huawei dia hanolotra miaraka amin'ny Huawei Matebook vahaolana mitovy amin'ny S Pen an'i Samsung. Manantena aho fa mifanaraka amin'ny telefaonin'izy ireo izany, satria toa mahaliana tokoa ny filokana.
Ilaina iray hafa amin'ity karazana hetsika ity ny Sony. Amin'ity tranga ity, ny mpanamboatra Japoney dia nanomana ny fampisehoana ho an'ny manaraka 22 Febroary amin'ny 08:00. Toa tsy maintsy mifoha maraina isika hampahafantatra anao ny vaovao atolotray.
Mitovy amin'ny Huawei, Sony vitany ny nandositra ireo famoahana tamina fomba mendri-piderana. Ny hany zavatra navoakan'izy ireo dia ny teaser te hahafanta-javatra miaraka amin'ireo andalana ireo. Amin'izany fomba izany dia tsy mahalala na inona na inona momba ity fampisehoana ity isika. Ny azontsika atao fotsiny dia ny maminavina. Na dia efa nieritreritra aza isika dia andao hanao izany lojika.
Tamin'ny fanontana farany an'ny IFA dia nanolotra ny Xperia Z5, Xperia Z5 Compact y Xperia Z5 Premium, ny telefaona voalohany misy efijery 4K. Inona ny vokatra sisa haseho? marina, ny takelakao Sony Xperia Z5 Tablet.
Raha mijery fanontana hafa an'ny MWC dia zava-misy azo antoka fa hampiseho an'izao tontolo izao ny takelaka vaovaony i Sony amin'ny 22 Febroary. Mistery ny mampiavaka azy, fa raha mijery ireo maodely teo aloha aho, dia hodorako ny tanako satria ny Xperia Z5 Tablet dia hanana Sakan-tsipika 10-inch miaraka amin'ny vahaolana QHD, na dia mbola gaga anay amin'ny efijery 4K aza izy ireo.
Azo antoka fa ny mpikirakira anao no Qualcomm Snapdragon 820, Miaraka amin'i RAM 4 na 6 GB an'ny DDR4 RAM, fanamafisam-peo samihafa miaraka amin'ny tahiry anatiny 32 na 64 GB azo aorina amin'ny alàlan'ny karatra micro SD sy Fanamarinana IP67, izay hanome ny Sony Xperia Z5 Tablet fanoherana ny vovoka sy ny rano.
Tsy azontsika hadino ny famolavolana Omnibalance izay miaraka amin'ny elanelan'ny Xperia ary azo antoka fa izany no lamina famolavolana hanaraka ny Xperia Z5 Tablet, izay hamely ny tsena amin'ny vidiny eo anelanelan'ny 499 euro sy 699 euro, miankina amin'ny safidintsika ny kinova WiFi na ilay maodely misy fifandraisana 4G.
Ny tandavan ZTE Axon dia mamely mafy ny tsena. Saingy mila bebe kokoa i ZTE. Ary izany no antony nandaharany ny famelabelarany ho an'ny 21 Febroary amin'ny 15:30 hariva Inona no hasehony antsika? zava-miafina lehibe iray hafa, na dia terminal roa aza no antenaina
Araka ny sary tafaporitsaka dia hanafika ny Samsung Galaxy S11 Edge ny ZTE Nubia Z7 amin'ny alàlan'ny fanolorana a Sarimihetsika miolaka 5.2-inch amin'ny sisiny izay hahatratra ny famahana ny 2K. Toa mandeha matanjaka i ZTE.
Ny endrika dia manintona tokoa manolotra sasany famaranana kalitao, zavatra izay manomboka zatra ny mpanamboatra. Tsy maintsy ampidirintsika ao ny processeur-ny Qualcomm Snapdragon 820, miaraka amin'ny quad-core Adreno 530 GPU ary RAM 4 GB hahafahanao mamindra atiny multimedia tsy misy olana izany.
ZTE miloka amin'ny fitehirizana anatiny miaraka amin'ity ZTE Nubia Z11, izay hanana ROM 128GB mivelatra amin'ny alàlan'ny slot micro SD card. Ary tsy afaka manadino azy isika Fakan-tsary 20.7 megapixel aoriana misy tselatra LED indroa, Ankoatry ny fananana fakan-tsary eo anoloana 13 megapixel eo anoloana, mety tsara amin'ny fakana sary na antso an-tsary. Ny ZTE Nubia Z11 dia antenaina fa hanana sensor amin'ny dian-tànana ary hahatratra ny tsena Espaniola amin'ny vidiny eo 450 sy 550 euro.
ZTe dia hanomboka ny tenany tanteraka amin'ny tsenan'ny phablet. Ary satria manao izany izy dia hanao be izany. ny ZTE Nubia X8 dia ho tompon'andraikitra amin'ny fidirana amin'ny tsena anjakan'i Samsung sy ny laharam-pahaizany Note noho ny fahombiazana mendrika sokajy avo lenta.
Ary ny tsaho milaza fa hanana phablet vaovao ZTE a Efijery 6.44 inch izay hahatratra ny famahana ny 2K, miaraka amina processeur Qualcomm Snapdragon 820 sy RAM 4 GB.
Ireo fakantsary dia hitovy amin'ny an'ny Nubia Z11: masolavitra 20-megapixel lehibe ary 13-megapixel eo anoloana, ankoatry ny fananana fakan-tsarimihetsika. Manahy ny amin'ny fizakantenan'izy ireo ve ianao? Mangina fa toa hampiditra ZTE a Batterie 4.500 mAh ao ny Nubia X8, mba hahafahan'ny terminal miaritra ny andro nefa tsy mikorontana.
Matetika i Xiaomi dia nandalo ny MWC. Ny mpanamboatra aziatika dia nanao ny fampisehoana tao Shina, ny tsenany. Saingy tamin'ity taona ity dia nanaitra anay izy tamin'ny filazany fa ny Xiaomi Mi 5 dia haseho ao amin'ny MWC, ny marina Alarobia 24 amin'ny 09:00 ora.
Fa maninona eny, andao hiverina any amin'ny cabal; Xiaomi Naharitra herintaona sy tapany ny fampisehoana an'ity modely vaovao ity, izay niteraka hype mahavariana. Tsiambaratelo misokatra iray fa amin'ny lafiny teknika dia ho biby izy, mpamono sainam-pirenena marina vonona hijoro amin'ireo mavesatra toa ny Samsung Galaxy S7. Fa maninona raha aseho azy io any Shina, toy ny fanaon'izy ireo matetika ny vokariny rehetra raha toa ka tsy ho tonga any Eropa ny Xiaomi Mi 5? Eto no ahafahan'izy ireo manome antsika ny tsy ampoizina lehibe.
Ahoana raha nanambara i Xiaomi ao amin'ny MWC fa midina eo amin'ny tsena eropeana izy? Raha tena fikasanao izany dia mety ny rafitry ny Kongresy Iraisam-pirenena Finday: ny famelabelarana natao tamin'ny faha-24 dia mamela ny jiro hitsangatsangana ary ho an'i Xiaomi irery ihany. Ary toerana inona no tsara kokoa noho ny amin'ny foibe telephony lehibe indrindra hanambarana ny fidiranao amin'ny tsena eropeana?
Eny ary, efa nanao ny vinavinany ihany isika, saingy hatramin'ny 24 febroary, tsy afaka hanamafy na inona na inona izahay. Mandritra izany fotoana izany, andao jerena ny toetra ara-teknika ny sainam-pirenena manaraka
Ho avy ny asan'ny fiasa ho an'i Xiaomi miaraka amin'ny fikasana hanorotoro ny Samsung sy LG ankoatry ny hafa noho ny fiasa mahery vaika sy ny vidiny mirary. Amin'izany fomba izany, ny Xiaomi Mi 5 dia antenaina hanana efijery 5.2 santimetatra izay hahatratra ny vahaolana HD manontolo.
Ny Xiaomi Mi 5 vaovao dia handresy noho ny processeur Qualcomm Snapdragon 820, miaraka amin'ny GPU Adreno 530 mahery.Hisy fanahafana samihafa an'ny Xiaomi Mi 5 miaraka RAM 3 na 4 GB, ary kinova miaraka amin'ny tahiry anatiny 32 na 64 GB.
Ankoatry ny fanohanan'ny SIM roa sy ny slot misy ny karatra micro SD, ny Mi 5 dia hanana fifandraisana NFC, IR mpandray ary bokotra ara-batana izay azo antoka fa ho sensor amin'ny dian-tànana.
Hugo Barra efa nampiseho taminay ny antsipirian'ny fakantsariny amin'ny endrika trondro. Ary tena tsara izy ireo. Misaotra an'izay mahery Fakantsary aoriana 26 megapixel izay manolotra vavahady f / 1.6 manolotra sary manaitra miaraka amin'ny safidy toa ny HDR.
Misy antsipiriany mahaliana iray hafa koa ho tonga miaraka aminao Karazana USB - C miaraka amin'ny rafitra famandrihana haingana, amin'ny alàlan'ny Qualcomm. Ny vidiny dia ho iray amin'ireo fananana lehibe amin'ny Xiaomi Mi 5 izay mitentina 400 ka hatramin'ny 550 euro miankina amin'ny maodely.
Ny mpanamboatra frantsay dia mialoha ny mpifaninana aminy amin'ny alàlan'ny fanaovana valandresaka ho an'ny mpanao gazety manokana ao anatin'ny rafitry ny MWC amin'ny asabotsy 21 Febroary amin'ny 18:00 hariva. Ireo no vaovao kasainao hatolotra.
Miaraka amin'ity Alcatel Idol 4 ity dia miditra amin'ny sehatra avo lenta ny mpanamboatra noho ny terminal izay, raha ny tsiliantsofina, dia hanana Fampisehoana Super AMOLED 5.5-inch Hahatratra ny vahaolana amin'ny 2560 x 1440 teboka (QHD), izay hanolotra zoro fijerena 180 degre.
Ny processeur-nao Qualcomm snapdragon 652 miaraka amin'ny core efatra izay mahatratra ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro hatramin'ny 1.8 GHz ary ny atidoha efatra hafa amin'ny 1.4 GHz dia hiandraikitra ny famelomana aina an'ity telefaona ity, miaraka amin'ny Adreno 510 GPU sy RAM 3 GB.
Fahatsiarovana ny Fitahirizana 32 GB Alcatel Idol 4S dia azo itarina hatramin'ny 512 GB noho ny slot misy ny karatra micro SD. Ny iray amin'ireo tanjaka dia ho tonga miaraka amin'ny fakantsary lehibe indrindra, misy ny mason-tsivana 16 megapixel miaraka amin'ny sary optika sy ny fanamafisana ny horonantsary, ary koa ny Flash LED roa.
Tsy afaka manadino momba ny Fakan-tsary mialoha 8 megapixel miaraka amin'ny fanekena fakantsary sy ny zoro fakana ambaratonga 84, mety tsara amin'ny fanaovana selfie. Ny batterie 3.000 mAh dia tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ny lanjan'ireo fitaovana Alcatel Idol 4s izay hanana Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, 4G LTE, Micro-USB (miaraka amin'ny fanohanana OTG ), Bluetooth v4.2, GPS ary A-GPS. Farany afaka manantena isika fa ny Alcatel Idol 4s manodidina ny 350 na 400 euro
Hisy ihany koa ny kinova Alcatel Idol 4s izay decaffeined. Ity modely ity dia hanana efijery 5.2 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana feno HD ary misy a Tontonana IPS LTPS miaraka amin'ny rafitra lamination OGS.
Ny processeur-nao Qualcomm Snapdragon 617 valo fototra (core efatra amin'ny 17 GHz ary core efatra hafa amin'ny 1.2 GHz) miaraka amin'ny Adreno 405 GPU ary ny fahatsiarovan-tena 2 na 3 GB an'ny RAM no ho motera lehibe an'ny Alcatel Idol 4.
Amin'ity modely ity, ny fahatsiarovana dia ahena ho Fitahirizana 16 GB, na dia azo itarina hatramin'ny 512 GB aza noho ny slot misy ny karatra micro SD. Ny fakan-tsary 13-megapixel lehibe dia hanana sary optika sy fampiorenana horonantsary, ary koa LED Flash roa, raha toa kosa ny masom-bolany 8 megapixel dia hanana zoro fakana 84 degre ihany koa.
Ny batterie 2.610 XNUMX mAh dia ho ampy kokoa ho an'ity telefaona midadasika ity, izay tsy heveriko ho lafo mihoatra ny 300 - 350 euro.
Ny orinasa Espaniola dia mifantoka tanteraka amin'ny fandefasana vokatra miaraka amin'ny Ubuntu, na dia toa misy modely Android aza. Hamafisinay ireto data ireto Alatsinainy 22 amin'ny 11:00 nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny vaovao BQ.
Ny antsipirihan'ity finday ity ihany no efa naseho, na dia azontsika atao aza ny mihevitra fa ho kinova vitaminina an'ny BQ Aquaris X5. Ny fanontaniana lehibe dia ny dikan'io "Plus" io. Sarimihetsika bebe kokoa? Tsara kokoa ny processeur?
Ary ny iray hafa lehibe tsy fantatra dia ny kinova Android hampiasain'ny BQ Aquaris X5 Plus. Azo inoana fa ho tonga miaraka amin'ny Cyanogen OS 13 ny sainam-piaramanidina vaovao an'ny orinasa Zaragoza, na dia mety ho tonga amin'ny Android 6.0 M. Tsy maintsy miandry ny famelabelarana aza isika hanamafisana izany.
HTC, eo ve ianao?
Taorian'ny fianjeran'ny varotra izay HTC One M9 dia toa tsy natao ho an'ny fampisehoana vaovao ilay mpanamboatra. Efa nandre zavatra avy tamin'i HTC One M10, fa tsy misy afa-tsy tsaho. Ary mazava be izany tsy hanolotra izany ao amin'ny MWC izy ireo satria tsy manana fandaharam-potoana fampisehoana.
Azo inoana fa hifantoka amin'izany ny mpanamboatra solomaso zava-misy virtoaly HTC Vive, na dia avelantsika any amin'ireo mpiara-miasa aminay aza izany Newsgaget.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MWC » Ireo no vaovao rehetra ho hitantsika amin'ny MWC 2016
Ny LG G5 miaraka amin'ny "On on" dia miasa hatrany raha hijery fampandrenesana ary miaraka amin'ny efijery faharoa toa ny V10 hahita fampandrenesana, misy dikany betsaka raha ...
Baomba mandady baomba na ilay manakaiky ny Bomberman angano
Foko, lalao an-tserasera amin'ny fotoana tena izy ary ny hetsika haingana rehetra amin'ity saga ity miandry anao amin'ny Metal Slug Attack